“Aubameyang wuxuu go’aansaday inuu ka tago Arsenal” – Halyeey kooxda Man United ah – Gool FM
(London) 03 Agoosto 2020. Qandaraaska kabtanka kooxda Arsenal ee Pierre-Emerick Aubameyang ayaa dhacaya dhamaadka xagaaga 2021, waxaana lala xiriirinayaa inuu u dhaqaaqayo midkood kooxaha Real Madrid, Barcelona iyo Inter Milan.
Haddaba halyeeyga Manchester United ee Rio Ferdinand ayaa tilmaamay in xiddiga reer Gabon ee Pierre-Emerick Aubameyang uu cagta saaray wadadii uu kaga tagi lagaa kooxda Arsenal.
Wargeyska “Mirro” ee dalka England ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay Rio Ferdinand, waxaana uu yiri:
“Waxaan u maleynayaa in isaga (Aubameyang) uu horay u go’aamiyay mustaqbalkiisa, waxay u muuqataa inuu meel kale aadi doono”.
“Arsenal waxay u baahantahay inay sameyso wax walba oo awooddeeda ah si ay u sii heysato”.
“Taageerayaasha kooxda Gunners wey jecelyihiin isaga, miyuu sidaas oo kale ka heli doonaa meel kale oo mustaqbalkiisa ciyaareed ah?”.
Si kastaba ha noqotee, 31-sano jirkan ayaa ka caawiyay Gunners inay ku guuleysato tartanka FA Cup-ka, kaddib markii 2 gool uu dhaliyay ay kaga adkaadeen kooxda Chelsea, kulankii xiisaha badnaa ay Sabtidii ku wada ciyaareen garoonka caalamiga ah ee Wembley.
Waxaa xusid mudan in xiddiga reer Gabon uu ku biiray kooxda ka dhisan waqooyiga magaalada London bishii January 2018, wuxuuna kaga soo biiray naadiga Borussia Dortmund qiimo dhan 63.75 million euros.